स्कर्टको नापमा विवेकको नाप अमिताभले नापे कि नापेनन् ? |
प्रकाशित मिति :2016-09-08 16:15:04
‘तिमीले लगाएको स्कर्टको नापका आधारमा तिम्रो विवेक कति छ भनेर तिमीलाई विश्वास दिलाउने अवसर कसैलाई नदिनु ।’ गएको सोमबार भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चनले नातिनीद्वय नव्या र आराध्यालाई सम्बोधन गरेर चिठ्ठी लेखे । उनले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि चिठ्ठी भाइरल भयो । ‘महिला भएकै कारण मानिसले तिमीहरूमाथि आफ्ना विचार र सीमा लाद्ने प्रयास गर्नेछन् । कसरी लुगा लगाउने, कस्तो व्यवहार गर्ने, कसलाई भेट्न हुन्छ ? कहाँ जान हुन्छ उनीहरूले भन्नेछन् । मानिसहरूको निर्णयको छायाँमा नबाँच्नु । आफ्नै विवेकको प्रकाशमा आफ्नै छनौट गर्नु । कहिल्यै पनि अरुलाई आफ्नाबारे निर्णय गर्न नदिनु ।’ यस्तो आशयको पत्र लेखेपछि अमिताभलाई महिलाका विषयमा थाहा नहुने कुरै भएन । अमिताभलाई नातिनी ठुला हुँदै गएपछि लाग्यो ‘यो संसारमा महिला भएर बाँच्न असाध्यै असहज हुन सक्छ ।’ कोही हजुरवालाई नातिनीको चिन्ता हुनु अस्वभाविक होइन् । कुरा हो हामी महिलालाई होइन सम्बन्धलाई माया र सम्मान गर्छाैं, आफन्तको चिन्ता गर्छौें, तर तिनै आफन्त ढुक्कले बाँच्ने समाज निर्माण गर्दैनौं ।
यो चिठ्ठी मात्र होइन् । उनकी बुहारी ऐश्वर्या रायले खेलेको चलचित्र ‘ए दिल हे मुस्किल’ पनि अहिले निकै चर्चामा छ । त्यो चलचित्रको कमजोर र सवल पक्षले होइन । कारण हो नायिका ऐश्वर्या र अभिनेता रणवीरसँगका केही दृश्य । यो चलचित्र आगामी २८ अक्टुवरमा रिलीज हुने भनिएको छ । तर समाचार यसरी आयो कि चलचित्र चलेपछि बच्चन परिवारको बदनाम नै भयो । युट्युबमा यसको प्रचार सार्वजनिक हुनु पहिले नै ससुरा अमिताभ, श्रीमान अभिषेक र श्रीमती ऐश्वर्याविच भनाभन भएको खबर बाहिर आयो । यसले ससुरा बुहारीको सम्बन्ध विग्रिएको समाचार भारतीयमात्र हैन नेपाली पत्रिकाले समेत महत्वपूर्ण स्थान दिएर छापे ।
केहीदिनअघि खवर आयो ऐश्वर्याले यो चलचित्र र दृश्यका विषयमा घरमा सवैलाई बताएकी थिइन् । यी दुवै खवर सेलाउन नपाउ“दै अमिताभको यो चिठ्ठी आएको हो । यसो लेख्नुमा यो चलचित्रले सिर्जना गरेको विवाद पनि कारण हुन सक्छ । उनले यस्लाई सन्तुलन गर्न लेखे की साँच्चै मनदेखि नातिनीको चिन्तामा लेखे यो उनै जानुन् । हामीले जानेको यतिमात्र हो । पुरुषले सम्मान महिलालाई गर्दैनन् , सम्बन्धलाई मात्र गर्छन् । छोरी, आमा, दिदीबहिनी, नातिनी र केहीले श्रीमती । महिलालाई सम्मान गर्ने पुरुष हुँदै नभएका भने होइनन्, तर बाहुल्य महिलालाई मान्छे नगन्नेको छ । त्यसले घाटा महिलालाई मात्र होइन स्वयं पुरुषलाई पनि गरेको छ । जव तपाई आफन्तलाईमात्र सम्मान गर्नुहुन्छ भने अरुले के गर्छ ?
तपाई अरुका छोरी/बुहारीलाई सम्मान गर्नुस । अरुले पनि तपाईका छोरीबुहारीलाई सम्मान गर्छन् । त्यसले गर्दा तपाईलाई आफ्ना छोरीबुहारी कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता हुन छोड्छ । महिला असुरक्षित भएको चिन्ता महिलाकोमात्र विषय हो ? एउटा बावुलाई आफ्नी छोरीको जति माया अरु कसैको लाग्ला ? त्यसबेला त्यो बावुले सोच्नुपर्छ उसको छोरीको मानसिक र शारीरिक सुरक्षाको चिन्तामात्र हैन् समस्याको समाधानको बाटो पनि खोज्नुपर्छ । महिलाको सुरक्षा गर्नु देश र सवै नागरिकको दायित्व हो । अमिताभले यस्तो चिठ्ठी लेख्दा उनले महिलाको लागि सुरक्षित समाजको पहल गर्नु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ?
महिलाका लागि सम्मान र स्वतन्त्रता ठुलो कुरा हो । काममा हस्तक्षेप हुन्छ । बाहिर निस्कँदा कुरा काटिन्छ । रातमा हिँड्दा पुरुषबाट असुरक्षा छ भन्दै हिँड्नुपर्छ भने आफ्ना छोरी र नातिनीप्रति गर्ने मायाले के प्रभाव पार्छ ?
तिमी बलियो हुनु त सवैले भन्छन्, तर एक चर्चित कलाकार भएका नाताले महिलामैत्री समाज निर्माणका लागि मैले यो गरें भनेर भन्न सक्ने हुनुपर्छ कि पर्दैन् ? यो विषय अमिताभको पालामा श्रीमती जयाको थियो । अहिले अभिषेकको पालामा ऐश्वर्याको र पछि आराध्याको हुनेछ भने यसमा अमिताभ र अभिषेकले के गरे ? के यो वावु र हजुरवाको समस्या होइन ? यो घर/घरको प्रश्न हो ।
यस्तोबेला सार्वजनिक गरेको चिठ्ठीले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ । यदि अमिताभले ऐश्वर्याले अभिनय गरेको चलचित्रको दृश्य हटाउन भनेको भए उनले समग्र महिलालाई कसरी हेर्छन ? अर्को उनले यसो भनेका थिएनन् र ऐश्वर्याले चलचित्रको दृश्यको विषयमा घरमा कुरा गरेकी थिईन् भने किन गरिन् ? के अमिताभ र अभिषेकले कुनै चलचित्र खेल्दा आफूले दिएको दृश्यका विषयमा घरमा पहिला अनुमति लिन्छन् ? घर सल्लाह हुनु नराम्रो होइन । तर सल्लाहको अर्थ यो होइन कि महिलाले मात्र आफ्नो कामका लागि पनि अनुमति लिन परोस ।
एउटा कलाकारको नाताले आफूलाई ठिक लागेको चलचित्र खेल्न पाउने स्वतन्त्रता महिलामा छ कि छैन् ? कतिसम्म भने बच्चनले करण जोहरलाई फोन गरेर आफ्नी बुहारीले खेलेका चलचित्रका केही दृश्य हटाउन भनेको खबर समेत बाहिरियो । जव उनी आफ्नी बुहारीका लागि एउटा दृश्यलाई लिएर यत्रो समस्या खडा गर्छन् भने उनले नातिनीलाई यस्तो पत्र लेख्नुले के अर्थ राख्छ ? पछि ति नातिनीका ससुराले उनको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा कुरा उठाउँछन कि उठाउँदैनन ? यस्तो कुरा अमिताभ सपनामा पनि सोच्न सक्दैनन् । किनकी यतिबेला अमिताभलाई आफ्ना ती दुई नातिनीको भन्दा बढी माया अरु कसैको सायदै लागेको होला ।
पत्रमा उनले दुवैलाई बच्चन या नन्दा भएपनि पहिला केटी र महिला भएकोले मानिसले उनीहरूमाथि आफ्नो सोच थोपर्न खोज्ने छन् भनेका छन् । अहिलेसम्म यस्तो सोच कोही महिलामाथि अमिताभले थोपरे कि थोपरेनन् ? यो उनले भन्नु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? महिलाको सम्मान र सुरक्षाको लागि मेरो हजुरबुवाको पनि देन थियो भन्न नव्या र आराध्याले पाउलान कि नपाउलान ? अमिताभले भनेका छन् ‘आराध्या ठुली भएपछि यो चिठ्ठी पढ्नेछिन् ।’ त्यसबेला जव ऐश्वर्याले छोरी आराध्यालाई भन्लिन ‘तिम्रो हजुरवुवाले मलाई आफूलाई सहज लागेर खेलेको चलचित्रको दृश्य काट्न निर्देशकलाई दवाव दिएका थिए ।’ मलाई त्यो जान्न मन छ । त्यसबेला सवैभन्दा बढी माया गरेर हुर्काएकी नातिनीको मनमा हजुरवुवाप्रति कस्तो सम्मान आउला ?